ဗုံလုံသီး သို့…………… | အံ့ဘုန်းမြတ်
Posted by ahuntphonemyat ⋅ March 5, 2009	⋅ 13 Comments
Journalist.	View all posts by ahuntphonemyat »	« အရုပ်ရသ အသံရသ စာရသ
ရသပညာဆိုတာကို မြန်မာလို ဒီလိုမြင်ကြည့်လိုက်တယ်… »
13 thoughts on “ဗုံလုံသီး သို့……………”
Posted by မနော်ဟရီ | March 5, 2009, 8:15 am ဒီကဗျာထဲမှာ စနစ်ဆိုးခေတ်တစ်ခုကို မြင်ရတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို မြင်ရတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားရဲ့အလွမ်းတချို့ ကူးစက်ခံလိုက်ရတယ်။ တကယ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ခင်ဗျားကို အရင်က မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ အမြဲတွေ့ရတယ်။ ဟိုတစ်နေ့က တောပြန်တော့ ခင်ဗျားကို dvb မှာတွေ့လိုက်ရသလိုပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်အားပေးနေပါတယ်။
Posted by နွေဆူးလင်္ကာ | March 6, 2009, 12:46 pm ကောင်း ရာ မွန် ရာ ရောက် ပါ စေ…………………………ဆု တောင်း ပေးပါ တယ် ……….
မင်း ရဲ့ သူငယ်ချင်း……………………………………အောင်အောင်
Posted by မင်းခန့် | March 7, 2009, 3:33 am ဗုံလုံသီးရေ…. ငါတို့မင်းတို့ကခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့မောင်နှမတွေပါ။
မင်းတို့ငါတို့ရဲ့မျှော်လင့်တွေ ချက်ခံစားချက်တွေကိုက ပျောက်ဆုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူး..။
နောင်လာနောင်သားတွေ မင်းတို့ငါတို့လိုမျှောလင့်ချက်တွေမပျောက်ပျက်ရအောင် ဖုံကွယ်ထားတဲ့စနစ်ဆိုးကို ငါတို့ဝိုင်းဝန်းဆွဲစုတ်ပြီး
Posted by ဂီဂီ | March 7, 2009, 7:28 am စိတ်မကောင်းပါဘူး…
ဗုံလုံသီး ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ…
Posted by အောင်သာငယ် | March 8, 2009, 2:15 am အံ့ဘုန်းရေ.. သနားပါတယ်နော် ငယ်ငယ်လေးပဲ.. စိတ်မကောင်းလိုက်တာ..
Posted by ခင်မင်းဇော် | March 8, 2009, 10:22 am ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေ နဲ့ ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးကို
ဗုံလုံသီးလေး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
Posted by May Kyaungthu | March 8, 2009, 1:25 pm ကဗျာ လေး က အရ မ်း ကောင်း တယ် ဗျာ…….ဖတ်ပြီး သွား တော့ ရင် ထဲ မှာ တမျိုး ကြီး ကျန် ခဲ့ တယ် ဗျာ……….ဗုံ လုံ သီး ရေ…နောင်ဘ၀မှာ ဒီ လို အဖြစ် မျိုး နဲ့ မကြုံ ရပါစေ နဲ့ လို့ ဆုတောင်း မိပါ တယ်……..
ငယ် ငယ် ၇ွှယ်ရွှယ် ဗျာ..နှမြော စရာ အရမ်းကောင်းတယ်…….သူ.မ်ိသားစု နဲ့ ထပ်တူ ထပ် မျှ ခံစားရပါတယ်……
Posted by koaung | March 9, 2009, 1:24 am မင်းလာပြောတဲ့နေ့ကတည်း သူ့ကို မသိပေမယ့် စိတ်မကောင်းပါ။
Posted by သင်ကာ | March 10, 2009, 8:34 am ပထမဆုံး မဖတ်ခင်မှာ ကြည့်လိုက်တော့ သာမာန်ပိုစ့်လေးလို့ ထင်လိုက်တယ်၊ မထင်မှတ်ဘဲ တော်တော်လေး ကောင်းသွားတယ်။ တကယ့်ခံစားမှု ဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး…။
Posted by Daywalker | March 13, 2009, 8:35 pm ကဗျာလေး ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ…
Posted by thu taw | March 14, 2009, 6:07 am ဗုံလုံသီးလေး နောင်ဘ၀ ဆက်တိုင်း ဒီ လို အဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ မ ကြုံပါစေနဲ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျ ဗုံလုံးသီးလေး ကောင်းရာဘုံမှာပျော်ရွှင်ပါစေဗျ
Posted by လမင်း | March 22, 2009, 12:19 am ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် vzo ခေတ်စောပိုင်းမှာ ခပ်တိုတိုလေး ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့ ညီမငယ်၊ နောက်ပြီး ကိုယ့်လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ဟောင်း အံ့ကြီးရဲ့ မိတ်ဆွေ တဦး အဖြစ် နှမြောတမ်းတစွာဖြင့် ဘဝတခုမှာ ငြိမ်းအေးစေသား၊ ငြိမ်းချမ်းစေသား ၊ ငါ့ညီငယ် အံ့ကြီးထံပါး ဝိဥာဉ်တခုအဖြစ် ပြန်လည် ကိန်းဝတ်စေသား။
Posted by AM | March 16, 2011, 6:12 pm LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...